आठ कुराहरू जुन तपाईं मेरो बारेमा थाहा पाउनुहुन्न | Martech Zone
आठ चीजहरू जुन तपाईं मेरो बारेमा जान्नुहुन्न
बिहीबार, अगस्ट 2, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
ठीक छ, ठीक छ ... म यसलाई स्टीभनबाट लिन्छु। यहाँ things वटा कुराहरु छन् जुन तपाईलाइ मेरो बारेमा शायद थाहा छैन:
गत वर्ष, मैले काममा कहिल्यै पनि प्रेम गीतको सबैभन्दा ठूलो रेन्डडिशन गरे। यो ढिलो भइसकेको थियो, हामीमध्ये in जना अफिसमा छोडे र यो इन्टरनेट रेडियोमा आएको हो। जब म मेरो भव्य समापन गर्दछु, मेरो सीईओ कुनाको वरिपरि हिंड्यो - ऊ आफ्नो भाइलाई हाम्रो नयाँ भवनको भ्रमणमा लगिरहेको थियो। मलाई थाहा छ ... गर्नुहोस्-do-do-do-do… मलाई थाहा छ ...।
दबोरा, मेरो एक मात्र बहिनी, थियो ब्रिटानिका ब्रिटानिया (sp?) जीन्स केटी'० को बीचमा। तपाईंको साथीहरूलाई तपाईंको बहिनीको बटको बारेमा अनावश्यक कुराकानी गरिरहनाले स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्छ। हामी कुराकानी गरेकै भए पनि म उनीप्रति गर्व भएको थिएँ।
मेरो सबैभन्दा खराब कामहरूमध्ये एक हाई स्कूलमा क्रेडिट कार्ड टेलमार्केटिंग एजेन्ट थियो। मैले २ हप्ता काम गरें र कसैलाई पनि साइन अप गरेन। मैले यसलाई २ हप्तासम्म प्रयास गरें किनभने मेरो बुवाले मलाई अहिले नै कहिले पनि नोकरी छोड्नुहुन्न भन्यो… तपाईं जहिले पनि केही न केही सिक्नु हुन्छ। यस मामलामा, मैले थाहा पाए कि मेरो बुबा सधैं सही हुनुहुन्नथ्यो।
हाईस्कूलमा मेरो सब भन्दा राम्रो साथी २० वर्ष पछि पनि मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी हो। माइकले मेरो ब्लग पढ्दैन - तर हामी अझै प्रत्येक दुई हप्ता कुरा गर्छौं। उहाँ र उनकी श्रीमती अविश्वसनीय हुनुहुन्छ।
यो हप्ता मैले मेरो ब्लगिंग क्यारियरको सबैभन्दा हास्यास्पद र अपमानजनक खरीद गरेको हुन सक्छ - मेरो कारको लागि २ 24 ″ टेलगेट चुम्बक:
दुई गर्मी पहिले, तपाईं मलाई लगभग हरेक रात खेल्ने अनलाइन फेला पार्न सक्नुहुनेछ इन्द्रेणी छ XBox Live मा।
मेरो ब्लग अब औसत मा राम्रो मा revenue 500 प्रति महिना राजस्व मा, सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो पाठ लिंक विज्ञापन.
यो सप्ताहन्त म हुनेछ NPR तपाइँको तलब वार्ता सुधार गर्न को लागी अनलाइन संसाधनको उपयोग छलफल गर्न। यो धेरै रमाईलो साक्षात्कार थियो तर म सास बाहिर थिएन किनकि मैले २० मिनेट भन्दा कममा रेडियो स्टेशनको पार्कि g ग्यारेजमा हतार गर्नुपर्‍यो। मलाई थाहा छैन यो कसरी बाहिरिनेछ! मैले अन्तर्वार्ता पाएँ किनभने मैले वेबसाइटमा कतै टिप्पणी गरेको थिएँ जुन मैले प्रयोग गरेको थिएँ Salary.com व्यक्तिगत तलब रिपोर्ट मेरो तलब सम्झौता गर्न र म पनि एक अनलाइन को मालिक हुनुहुन्छ वेतन कैलकुलेटर.
मलाई लाग्छ कि मैले यस प्रकारको मेम् पहिले नै अरुलाई पठाइदिएको छु, त्यसैले म यसमा अगाडि बढाउँदिन - तर म यसको जवाफ दिन चाहन्न!
फार्मस्प्रिंगको साथ निर्माण फारामहरू
फिडका लागि गुगल एड्सेन्स
अगस्ट,, २०१22007:२१ अपराह्न
एक साइड नोटको रूपमा मलाई खुशी छ कि कोहीले TLA बाट पैसा कमाउँदैछ किनकि मैले एक प्रतिशत पनि बनाएको छैन कुनै विज्ञापन देखाउन कहिल्यै छोडेको छैन। र मैले se अलग अवसरहरुमा प्रयास गरेको छु। मसँग पनि तिनीहरूको प्लगइन स्थानमा छ र सक्रिय छ .. मेरो लागि सेवा खाली र शून्य छ।
त्यो होइन कि एड्सेन्स कुनै राम्रो छ तर लीटमा उनीहरूको विज्ञापनहरू देखाउँछन् ... म शायद पर्याप्त चीजहरू भन्दा गल्ती गर्दैछु गल्ती गरीरहेको छु तर यो निराशाजनक छ हप्ताहरू बित्दै जाँदा र भाग्य पाएको एकल पैसा कमाउन।
errr .. ooppsss… साइड रेन्ट LOL को बारे माफ गर्नुहोस्
अगस्ट 3, 2007 मा 9: 22 AM
त्यहाँ TLA सँग बस्नुहोस्। म विज्ञापनमा विश्वास गर्दछु हो ब्लग को प्रशासकहरु को लागी लुकेको एकचोटि मैले एकल प्रायोजक पाएँ, तिनीहरू पछाडि रोलिंग सुरु भयो। मैले सोचें केहि गलत थियो तर यो एक उत्तम प्रणाली हो।
अगस्ट,, २०१32007:२१ अपराह्न
ओह, मैले TLA लाई समातेको छु जब उनीहरु पहिलो पटक उपलब्ध भए तर मैले कहिले पनि कुनै विज्ञापन प्रदर्शन गरेको छैन .. कहिले पनि होईन। मैले यो सेवा अन्तिम पटकमा over महिना भन्दा बढी देखाउँदा तीन अलग अवसरहरूमा प्रयास गरेको छु ... र अझै नाडा
एड्सेन्स पनि निराशाको भारी साबित भैरहेको छ… मसँग पृष्ठहरू व्यावहारिक पृष्ठ दृश्यहरूको साथ हुन सक्छ र शत प्रतिशत (अन्तमा हप्ताहरू) नदिन। मलाई सोच्न मद्दत गर्न एक एड्सेन्स गुरु आवश्यक छ 'किनकि म निश्चित छु कि मैले सायद केहि गलत गरिरहेछु ... यो स्वीकार्य हुन सक्छ कि केस केस विज्ञापन विज्ञापनको कुनै पनि साथ निराशाको स्तरलाई मद्दत गर्दैन।
ओह राम्रो छ ... तपाईंको पोष्ट टिप्पणी अपहरणको लागि पर्याप्त डग 🙂 माफ गर्नुहोस् तर यो मसँग अहिले एक सहज कुरा हो
अगस्ट 3, 2007 मा 8: 13 AM
पाठ लिंक जानकारी को लागी धन्यवाद।
के तपाईंसँग खरीद गर्न राम्रो स्थान छ?
कार म्याग्नेट? मैले हालसालै बनाएको छु
एक र यसको बारेमा मेरो ब्लगमा लेखें।
भेट्न को लागी धन्यवाद ......
अगस्ट 3, 2007 मा 9: 24 AM
यो तपाईंको पोष्ट हो जसले मलाई प्रेरणा दियो! मैले यसलाई मार्फत आदेश दिएँ ग्राफिक्सल्याण्ड र यसलाई २ दिनमा प्राप्त भयो। मूल्य गजबको थियो, तर मलाई डर छ कि मैले पर्याप्त आकारमा ध्यान दिएन ... यो विशाल छ! 🙂
अगस्ट 3, 2007 मा 10: 57 AM
महान! मेरो पोष्ट र उत्साहित
फोटो मद्दत गरियो। विशाल राम्रो छ र
पढ्न सजिलो। को लागी धन्यवाद
मूल्य जाँच गर्न लिंक।
अगस्ट 3, 2007 मा 11: 48 AM
टेलगेट चुम्बकलाई माया गर्नुहोस्। अधिकतम प्रभावको लागि पनि लोगो तपाईंको कारको छेउमा पेंट गरिएको बारेमा कसरी 😉
मैले TLA फेरि केहि प्रयास गर्नुपर्नेछ र हेर्नुहोस् कि उनीहरूले मलाई यस पटक स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्। गत महिना मेरो लागि एड्सेन्स %०% माथि थियो तर हामी मेगा बक्सहरू कुरा गरिरहेको छैनौं